Isticmaalka Dhuxusha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
“Waan Cafiyey Saygayga oo Kiraystay Nin i Dili Lahaa”
Maxamuud Axmed Muuse — April 17, 2019
Inta ugu badan dhuxusha waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo dab lagu karsado cuntada, shaaha iwm. Sidoo kale, waxaa loo isticmaalaa in laga helo kuleyl la diirsado. Dhuxushu waxay ka timaada geedaha, qeybo ka mid ah dhirta ayaa la gubaa ka dib la damiyaa intaanay dambas noqon. Waa la jajabiyaa qoryaha dhuxusha ka dib, lagu cabeeyaa jawaano iyo baco loogu talo galay in lagu iib-geeyo.
Noocyo ka mid ah dhuxusha, sida dhuxusha Jilicsan waxaa loo isticmaalaa in lagu shito Badeecada ama Shiishada.
Tiro badan oo geedo ah ayaa la soo jaraa si loo sameeyo dhuxul. Dhuxushu waxay halis iyo khatar badan ku heeysaa jiritaanka dhirta. Sababtoo ah tiro badan oo geedo ah ayaa la jaraa si looga sameeyo dhuxul. Wakhti yar gudaheed, tani waxay keenaysaa tafiir go’a dhirta iyo nabaad-guur ku yimaada carrada.
Sidoo kale, marka la samaynayo dhuxusha qiiq badan oo ka kooban kaarboon-laba-ogsaydh iyo kimikooyin sun ah ayaa hawada gala taas oo keenaysa wasakhowga hawada.
In ka badan 90% qoysaska wadanka soomaaliya waxay maalin kasta isticmaalaan tiro badan oo dhuxul ah taas oo lagu kariyo cuntada iyo waxyaabaha kale. Midani waxay khatar badan ku heeysaa dhirta dhulka oo wakhti dhow laga baqayo ineey dhamaato.
Guud ahaan, dunida mamnuuc ayay ka tahay gooynta dhirta sababtoo ah nolosha dhammaanteed ayaa si toos ah ugu tiirsan dhirta.
Diyaaarinta dhuxusha iyo hababka lamaro
Sidaynu ka war haynu waxkastaa oo laqabtaa waxa ay leeyihiin nidaam u gooniya si looqabto wixii markaas loo baahi qabay. Habka diyaarinta dhuxusha waa hab u baahan xirfad iyo hawl karnimo. Waayo waxaa loobahan yahay in lahelo rag xoog leh oo jara dhirta dhumucdoodu weyn tahay. Kuwaasoo markay jaraana uruuriya dabadeedna habeeya oo qora si loo helo hab farshaxamaysan oo una fudud shaqada markay qabanayaan. Kadibna meel ayaa laysugu keenaa waxaana looqodaa bohol ama god weyn si markaa hawsha loogu qabto. Waxaadna sifudud ugu fahmi kartaa hababka lamarayo iyo sida wax loo samaynaayo marka lagu baayo geedka.
Markad ufiirsato jaantuskaan hoose waxaad arkaysaa in lagu bay geed si loo qalajiyana waxay dab kaga shideen jirrida, waana dhibaatada ugu weyn ay ku hayaan dadka guba dhirta. Waayo kama fakarayaan waxa ku dhacaya geedka mustaqbalka dhow. Haddii maanta aad geed kubto imisa dhir leeg ayaa bishii gubaysaa? Imisa dhir leeg ayaa sanadkii baabi’inaysaa?
Waa wax aan la soo koobi Karin dabar go’a ku socda dhirteenii aynu dugaalsanaynay xooluhuna ay inoo daaqayeen. Marka geedka lagubo waxaa la soo uruuriyaa dhammaan laamihii iyo jirridii iyo wixii xashiish ahaa ee kadaatay geedka. Waxaana laysugu keenaa meel fagaare ah si loo helo geed dhuxul. Waxaa laqodaa god weyn halkaasoo lagu guro qoryaha laga soo uruuriyay.
Kadibna waxaa lagu owdaa caws ama nagaar yar-yar oo jilicsan si uu ugubto geedka dusha ayaana looga simaa geedahaa yar-yar. Kadibna waxaa lagu shidaa dab si loogubo geedka loogana helo dhuxul wax ku ool ah.
Si aad ufahanto, qaabka godka loogu rido iyo habka loo maareeyo marka lagu baayo dhuxusha. Ileen waxaa ku baxay mood iyo nool, ninka gubayana waxa uu ka fakarayaa waa moodkaas taasoo uu kugadanaayo qaad, sagaar, tubaako iyo xashiisho. Taasna waa caqabad nahaysata haddaan nahay ummada soomaaliyeed. Waxaanu xaalufinay dhirteenii waan jarnay waan gubnay. Waxaa intaa usamaynaynaana waa saan ku helilahayn xashiisho iwm.
Jaantuskaan sare waxa uu inoo muujinayaa habka laysugu keeno geedka laamihiisa si loo gubo loogana laayo cayayaanka iyo dheecaanka uu geedku leeyahay.
Habkaana waxa uu ina tusinayaa marka geedka lagubo waxaa lagu shubayaa ciid si loo bakhtiiyo dabkii heerkulkiisu aad u sareeyay. Waayo waxkastaana waxay leeyihiin cilmi gaar ah kaasoo ubaahan in la maro marka aad rabto in aad dhuxul gubto si aad u hesho waxku anfaca oo aadan ku khasaarin.
Markii lagubo geedka, waxaa soobaxa dhuxul qaxmaysa taasoo ubaahan in la ga dhigo dhuxushii rasmiga ahayd. Waxaadna sawirkaan hoose ku arki kartaan habka ugu fudud ee marka geedka lagubo unoqon karo dhinbilo iwm.
Markii lagubo dhuxusha ayna isku dhacdo ayaa waxaa lagu cabeeyaa jawaano si loo iib geeyo dhuxushii lagubay. Waxaadna aragtaa dhirti aan soo aragnay sidii looga diyaariyay dhuxushaan hoos taal oo aan kow iyo laba toona lagu soo koobi Karin. Waxaa kaloo is waydiinaysaa imisa geed ayaa halkaan ku basbeelay oo baaba’a iyo dabar go’ ku dhacay ma ahan mid la soo koobi karo. Eeg jaantus yadaan hoose waxaad ku arki kartaa dhuxusha ku cabaysan jawaanada sida loogu cabeeyay.
Waxaa aad fahantay sida loo diyaariyo dhuxusha, kadib markii la diyaarsho dhuxusha laguna cabeeyo jawaano. Waxaa lagu raraa gaadiid kala duwan ku waasoo geeya meelaha loogu talagalay in laga iibiyo. Waxa aad arkaysaa sida loogu daabulaayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyadoo laga qaadayo meel lana geeyo meel kale.
Dhuxusha markii lagu guro jawaano waxaa la saarayaa baabuurta waa weyn waxaana lageeyaa magaalooyinka waa weyn, si halkaa loogu iib geeyo. Wixii la soo jaray dadka gata dhuxusha waxaa ka sii macaasha dadkale oo fara badan ku waasoo badanaa ka sii gada dad kale.
Tusaale ahaan, gurigaaga waxaa laga adeegsadaa dhuxusha maalinkasta. Waxaana laga yaabaa in aad soo gadato bishii shan kiish oo dhuxul ah. Imisa ayaa sanadkii gurigiina laga isticmaalaa oo dhuxul ah? Ka soo qaad inaad sanadkii ugu yaraan isticmaashay 60 kiish oo dhuxul ah.
Haddaba waxaa is weydiin mudan haddii aad sanadkii isticmaashay 60 kiish imisaa geed ayaa halkaa ku basbeeley oo xaaluf ku yimid?. Waxaa taalooga fadhiyaa in aad adi isweydiiso inta noole dabar go’ay? Imisa khasaare intee leeg ayaa ku yimid dhirtii ay caanka ku ahayd soomaaliya.
Eeg jaantuskaan sare, waxa uu ku tusinayaa in dhuxushii laga keenay meel aad ufog laguna sooraray baabuurkii weynaa, insi toos ah uu u keenay magaalada. Kadibna ay la wareegaan dad gaara oo kaganacsada dhuxusha. Ku waas oo ku sii dhiiri geliya kuwa dhirta guba in ay keenaan dhuxul aad ubadan si ay u helaan moodkii ay doonayeen. Masiibooyinkaan loosoo diray deegaanka in ay dabar gooyaan waxay ka fakarayaan siday u helilahaayeen qaadkooda.
Tags: Isticmaalka dhuxusha
Next post Masiibada Nabad Guurista Dhirta “Bacaha”
Previous post Nabaad Guurka Dhirta “xaalufka dhirta”